Statistics Marketing amin'ny finday ho an'ny 2015 | Martech Zone
Tsy mampihomehy fa mizara an'ity sary ity izahay tamin'ny andro nitsidihanay ny foiben'i Bluebridge, sehatra fampiharana finday nomerika. Nanana rindranasa finday tena matanjaka izahay, saingy nivezivezy lavitra ny finday ny orinasa, ary izao dia mijanona amin'ny rindranasa finday tapaka izahay.
Fantatsika fa very ny fandraisana andraikitra sasany amin'ny alàlan'ny tsy fanosehana ny atiny mankany amin'ny lampihazo. Izahay dia niandry fatratra ny hanavao kinova vaovao, ary Bluebridge dia manana fitaovana faran'izay tsara. Manao asa tsy mampino izy ireo ary mitombo haingana.
Ny fiakarana haingana amin'ny finday smartphone sy tablette dia nahitana saika ny lafiny rehetra amin'ny marketing nomerika. Ny fiatraikany dia miainga amin'ny fanovana algorithm vao haingana indrindra 'Mobile-friendly' amin'ny valin'ny fikarohana finday Google hatramin'ny fihenam-bidy ambany kokoa amin'ny finday avo lenta, fampiasana media sosialy amin'ny finday ary ahazoana antoka fa mailaka-mailaka ny mailaka ataonay. Dave Chaffey
Hevitra misongadina ao amin'ny The State of Mobile Marketing 2015
86% ny fotoana lany amin'ny rindranasa finday mifanohitra amin'ny tranonkala finday. Raha te hirotsaka amin'ny alàlan'ny finday ianao dia tonga ny fotoana fampiasam-bola amin'ny rindranasa finday!
90% amin'ireo mpividy smartphone no mampiasa ny findainy hetsika mialoha ny fividianana ary 84% amin'ireo mpiantsena no mampiasa ny fitaovany mba hanehoana mandritra ny fivarotana.
25% amin'ny ankapobeny karoka fangatahana amin'ny finday izao.
In 2016, fandaniana doka finday hihoatra ny fandaniana amin'ny birao, hahatratra $ 70 miliara eran-tany.
Taham-panokafana mailaka finday nitombo 180% tao anatin'ny telo taona, 48% n'ny mailaka rehetra nosokafana tamin'ny finday avo lenta.
Tags: 2015fandaniana doka findayfampiharana findayMobile Appstaha tahan'ny mailaka findayinfographic marketing amin'ny findaystatistikan'ny marketing amin'ny findaystatistikan'ny marketing amin'ny findaykaroka finday